Shiinaha Custom Mugga High Rogers saarayaasha Board wareeggeedii PCB iyo alaab | Fastline
Layers Double Board PCB Fr4 Layout
Single Lakabka Board PCB Fr4 Warshadaha
Radio Quick adag hayalka san PCB
Been PCB Small been Tayada Sare adag ...
Adag Business Quick hayalka san PCB
0.2mm Hole PCB riixo Mixed PCB -Flexible adag ...
0.1mm Hole adag Board PCB -Flexible for rada
Mugga OEM Professional High Roger PCB
Mugga Custom High Rogers Board wareeggeedii PCB
Cusbi koronto Hole Rogers Double Board wareeggeedii PCB dhinac
Gold dahaadhay Rogers PCB been Price
0.15mm Hole PCB adag Board PCB -Flexible for Hobbyist
0.15mm Hole PCB Standard adag-debecsan Board PCB
Mugga High Quick adag hayalka san PCB
guddiga 0.1mm Hole adag-debecsan PCB Board Gerber
Rogers 4003 PCB ah lakabyo: 2L dhumucdiisuna: 0.4mm Waxyaabaha: Rogers 4003 Min track width: 0.12mm Min meel track: 0.15mm Min godka: 0.2mm CU: 1oz / 1 oz Soldermask: Green Silkscreen: No oogada dhameysatay: ENIG Waxaan diiradda on warshadaha PCB iyo PCBA muddo ka badan 10 sano, oo inta badan u adeega suuqyada Yurub iyo Mareykanka , iyo sidoo kale waqooyiga iyo South American iyo suuqyada Asia koonfur bari. Waxaan rajaynaynaa inuu kaa caawiyo inaad soo saaraan alaabta tayada tartanka suuqa ee degaankaaga.
Mugga Custom High PCB RogersBoard wareeggeedii
1.Introduction of Mugga Custom High Rogers Board wareeggeedii PCB
Wareeggeedii Fastline waa karti u leh macasha buuxa iyo macasha ku daabacan adeegyada shirkii guddiga circuit qayb ahaan. Waayo, macasha buuxda, waxaan is ogow of nidaamka oo dhan, oo ay ku jiraan diyaarinta Daabacidda Guddiyada Circuit, iibsiga qaybaha, si raadraaca online, la socodka joogtada ah ee tayada iyo shirkii final. Halka for macasha u eexan, macaamiisha siin kartaa PCBs iyo qaybaha qaarkood, iyo qaybaha haray in la qabtaa noo by.
1. In ka badan 10 sano waayo-aragnimo saaraha in PCB urursada oo beerta PCB.
2. qiyaasta Big of-soo-saarka waa inuu xaqiijiyo in aad qiimaha iibka waa hoose.
3. line-soo-saarka Advanced damaanad qaadaya tayada deggan iyo taako cimri dheer.
4. keena dhow wax PCB sida looga baahan yahay.
Imtixaanka 5. 100% waayo, dhammaan waxyaabaha PCB kartoo.
6. Adeegga One-stop, waxaan kaa caawin kara si aad u iibsato waxyaabaha.
PCB string Time Lead:
1-2 ah lakabyo
4-6 ah lakabyo
Fiiro gaar ah: Base on dhammaan xogta la helay noo by oo waa inuu ahaado mid dhameystiran iyo dhibaato free, waqti Lead diyaar u yahay inuu markab.
Waxaan aaminsan nahay in tayada ku haya nafta ganacsi iyo bixisaa, adeegyada injineernimada iyo wax soo saarka teknoolajiyada sare waqti muhiim u ah suuqa korantada.
Tayada Sound Balaadhisay sumcad wanaagsan Fastline. Macaamiisha Loyal ayaa wada nala mar kale iyo mar kale iyo macaamiisha cusub u yimid inuu Fastline in la dhiso xiriir iskaashi markay maqlaan of sumcad weyn. Waxaan rajeyneynaa in aad bixiya adeeg tayo sare leh!
2.Production Faahfaahinta Mugga Custom High Rogers Board wareeggeedii PCB
3. Codsiga o f Mugga Custom High Rogers Board wareeggeedii PCB
Waxaan u adeegi jireen PCBA tayo sare leh si ay u dalal badan, ka macaamiisha qalabka korontada si isgaarsiinta, tamar cusub, aerospace, baabuurta, iwm
4. aqooneedka Mugga Custom High Rogers Board wareeggeedii PCB
Waxaan dhigay waaxda a oo kala duwan ayaa halkaas qorsheeyaha wax soo saarka gaar raaci doonaa wax soo saarka si ay ka dib lacagtaada, si ay ula kulmaan wax soo saarka PCB iyo shuruudaha shirka.
Waxaan leenahay hoos baxdo si ay u caddeeyaan our pcba.
Waxaan u isticmaali vacuum iyo kartoonka in duub alaabta, si loo hubiyo in dhammaan gaadhi kartaa in aad gebi ahaanba.
7.Deliver Oo adeegaya
Waxaad dooran kartaa wax kasta oo shirkadda express in aad leedahay la xisaabtaada, ama noo account, waayo xirmo culus, maraakiibta seaway laga heli doonaa, sidoo kale.
Marka aad hesho pcba ah, ha iloobin in aad hubiso iyo tijaabiyo iyaga,
Haddii wax dhibaato ah, soo dhaweyn nala soo xiriir!
Q1: Ma waxaad tahay shirkad warshad ama ganacsi?
A1: Waxa aanu leenahay saarka PCB & warshad Assembly u gaar ah.
Q2: Waa maxay tirada ugu yar ee si?
A2: Our MOQ ma aha isku mid ah oo ku salaysan waxyaabaha kala duwan. Amarada Small sidoo kale waa la soo dhaweynayaa.
Q3: waxa file waa in aan bixino?
A3: PCB: file Gerber waa ka sii wanaagsan, (Protel, PCB xoog, pads gudbiso), PCBA: file Gerber iyo liiska BOM.
Q4: No file PCB file / GBR, kaliya waxay leeyihiin saamiga PCB ah, aad u soo saari karaan ii?
A4: Haa, waxaan ka caawin kara in aad Gadzhiyev PCB ah. Just soo dir PCB saamiga noo, waxaan Gadzhiyev yaabaa design PCB iyo shaqeeyaan waxa.
Q5: Waa maxay kasta oo macluumaadka kale ee la bixiyey waa in laga reebo file?
J5: caddaymaha Ka dib ayaa loo baahan yahay, waayo, oraah:
a) wax Base
b) Guddiga dhumucdiisuna:
c) oo dhumucdiisuna waxay Copper
d) daaweynta oogada:
e) midabka ah ee maaskaro Alxan iyo silkscreen
Q6: Aad ayaan ugu qanacsan ka dib markii aan akhriyey macluumaadka ahay, sida aan bilaabi kartaa si aad u iibsato Amarkeygii
A6: Fadlan la soo xiriir iibka our at homepage online, mahadsanid!
Q7: Waa maxay shuruudaha gudbinta iyo waqti?
A7: Waxaan inta badan u isticmaalaan marka la eego FOB oo markab alaabo ee 7-15 maalmood ku xiran tahay tirada si, ahaanayta.
Golaha Rogers PCB
0.1mm PCB adag
0.2mm PCB adag
Rogers 4350 Waxyaabaha PCB
Rogers Board Ceramic PCB
Rogers Waxyaabaha PCB
Wareeggeedii Simple Rogers PCB Board beddeli Engine ...
PCB Integrated Press Hole Rogers
Address: 509 ZhongYang Building, No.24 FuHai Road, FuYong, Bao An, Shenzhen, Guangdong, Shiinaha 518103
© Copyright - 2010-2017 : All Rights Reserved. Products Featured,Sitemap ,Mobile Site
Fr4 hayalka san PCB, Customized Rigid-Flex PCB, PCB Rogers, Adag-debecsan PCB, Adag hayalka san PCB, Adag-hayalka san Board PCB,